» नकआउट राउण्डमा भिड्नेहरु, भाग ३ (भिडियो)
नकआउट राउण्डमा भिड्नेहरु, भाग ३ (भिडियो)
२४ आश्विन २०७६, शुक्रबार ०९:०३
चन्द्र घलान, २४ असोज । चर्चित सिंगिङ रियालिटी शो ‘द भ्वाईस अफ नेपाल’ को सिजन २ मा अहिले ब्याटल राउण्ड चलिरहेको छ । डिजिटल अडिसन हुँदै ब्लाईन्ड अडिसनबाट छनौट भएका ६४ जना प्रतियोगीहरुले अहिले ब्याटलमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । यस भिडियो सिरिजको तेस्रो भागमा नकआउट राउण्डका लागि छानिएका थप ५ जना प्रतियोगीहरु गीता शर्मा, विशाल राई, नविना जोशी, सुमन परियार र राम लिम्बुका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । नकआउटका लागि छानिएका अन्य प्रतियोगीहरुका बारेमा जान्न हाम्रो च्यानलका थप भिडियोहरु हेर्नुहोला । हेर्नुहोस् भिडियो–
गीता शर्मा, सिक्किम– ब्याटलबाट नकआउटका लागि छानिएका नवौँ प्रतिभा हुन् सिक्किमकी गीता शर्मा । ब्याटलमा उनले प्रेक्षा लम्सालसँग प्रतिस्पर्धा गरेकी थिईन् । ‘कसको आँखा लाग्यो बरै बोलको’ गीतमा प्रतिस्पर्धा गरेकी गीताले नकआउटका लागि बाजी मारिन् । सँगीतमा संघर्ष गरिरहेकी गीताको जीवनकथामा पनि नयाँ मोड आउने अपेक्षा गरिएको छ । बुवाले परिवारलाई छोडेपछि पिडामा परेकी गीताले अध्ययन बिचैमा छोड्न बाध्य भएकी थिईन् । अध्ययन रोकिएपछि संगीतलाई आफ्नो लक्ष्य बनाएकी गीता आफै कमाउदै सँगीत क्षेत्रमा संघर्ष गर्दै छिन् । ३३ वर्षीया गीताले ब्लाईन्ड अडिसनमा चारै जना कोच फर्काउन सफल भएकी थिईन् । उनी कोच राजुको टिममा नकआउट भिडन्तको तयारी गर्दैछिन् ।
विशाल राई, भोजपुर हाल भक्तपुर– ब्याटलबाट नकआउटका लागि छानिएका दशौँ प्रतिभा हुन् भोजपुर घर भई हाल भक्तपुर बस्दै आएका विशाल राई । ब्याटलमा उनले सदिक्षा पोखरेलसँग प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । ‘रातो टिका निधारमा’ बोलको गीतमा प्रतिस्पर्धा गरेका विशालले नकआउट राउण्डका लागि बाजी मारे । विशालले परिवारबाट सँगीतमा लाग्न निकै सहयोग पाएका छन् । उनी प्ले ब्याक सिंगर पनि हुन् । सँगीतको क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै नाम स्थापित गर्ने दौडमा रहेका विशाल कोच प्रमोदको टिममा नकआउटका लागि तयारी गर्दैछन् ।
नविना जोशी,बालाजु,काठमाडौँ– ब्याटलबाट नकआउटका लागि छानिएकी एघारौँ प्रतिभा हुन् बालाजुकी नविना जोशी । ब्याटलमा उनले शोलुखुम्बुकी सविना राईसँग प्रतिस्पर्धा गरेकी थिईन् । ‘माया यो माया’ बोलको गीतमा प्रतिस्पर्धा गरेकी नविनाले नकआउटका लागि बाजी मारिन् । रेडियो नेपालमा बुवाले गीत गाउँदै गर्दा संगीतमा रुचि राखेकी नविनाले बुवाबाट नै सारेगम सिकेकी हुन् । ३० वर्षीय नविना कोच आस्थाको टिममा नकआउटको लागि तयारी गर्दैछिन् ।
सुमन परियार, हेटौँडा, मकवानपुर–ब्याटलबाट नकआउटका लागि छानिएकी बाह्रौँ प्रतिभा हुन् मकवानपुर हेटौँडाकी सुमन परियार । ब्याटलमा उनले झापाका राम लिम्बुसँग प्रतिस्पर्धा गरेकी थिईन् । ‘आवाज देउ’ बोलको गीतमा भएको प्रतिस्पर्धामा सुमनले नकआउटका लागि बाजी मारिन् । नेपाल आईडल जस्ता कार्यक्रमहरुमा समेत सहभागिता जनाएकी सुमनले १३ वर्षको उमेरदेखि गीत गाउन थालेकी हुन् । उनी आफ्नो बुवालाई सँगीतको प्रेरणाको श्रोत मान्छिन् । उनी कोच दिपको टिममा नकआउटको लागि तयारी गर्दैछिन् ।
राम लिम्बु, विर्तामोड, झापा–ब्याटल राउण्डमा पहिलो पटक स्टिल हुँदै नकआउटका लागि छानिएका १३ औँ प्रतिभा हुन् झापा बिर्तामोडका राम लिम्बु । ब्याटलमा उनले मकवानपुर हेटौँडाकी सुमन परियारसँग प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । सुमनले नकआउटका लागि बाजी मारेता पनि अन्तिम समयमा कोच प्रमोदले उनलाई स्टील पावरको प्रयोग गर्दै नकआउटका लागि सेभ गरेका थिए । स्थानीय ब्याण्डका दाईहरुसँगै गीत गाउँदै हिँड्ने गरेका रामले औपचारिक रुपमा साँगितिक कक्षा लिएका छैनन् । तर उनी गीत गाउन माहिर छन् । २३ वर्षीय राम दोस्रो सिजनको ब्याटल राउण्डमा चारै जना कोचलाई फर्काउन सफल छैटौँ प्रतियोगी समेत हुन् । उनले कोच दिपको टिमबाट ब्याटल प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । अब भने उनी कोच प्रमोदको टिमबाट नकआउटको तयारी गर्दैछन् । आदरणीय दर्शविन्द यी प्रतियोगीहरुमध्ये तपाईलाई कसको आवाज मनपर्छ ? तपाईको विचारमा फाईनलसम्म कुन प्रतियोगीहरु पुग्न सक्छन् ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।